စိတ်ထဲမပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
လည်ပင်းမှာ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတဲ့ ပန်းကုံးတွေ စားပွဲပေါ်ပစ်တင်ရင်း နှုတ်ခမ်းမှာ ဆိုးထားတဲ့ အနီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းနီကို တစ်ရှုးနဲ့ ပွတ်သုတ်ပစ်တယ်။ ခုံပေါ်ထိုင်ချရင်း သောက်ရေဘူးဆီ လက်အလှမ်း…
“ရှေး…နင့်ကို ဂျာကြီးလှမ်းခေါ်နေတယ်… ဘိုးတော်တွေဝိုင်းမှာ”
ကိုယ်လုံးနည်းနည်းသွယ်ပေမဲ့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကလေးပုံစံလေးနဲ့ ညိုက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့မေးတယ်… ဧကန်န ခုချိန်ထိ လူမရသေးဘူးထင်တယ်…
“ငါ တကယ် သွားရမလားဟင်”
“အင်း သွားလိုက်…ငါနေမကောင်းလို့ အခုပဲ ပြန်တော့မှာလို့”
ညို ထွက်သွားမှ ရေဘူးကို မော့သောက်ရင်း အိတ်ထဲက ဖုန်းကို ဆွဲထုတ်တယ်…
နှစ်ပေါင်းများစွာ.. ရင်းနှီးနေတဲ့ အသံတစ်ခု…
“ငါ ဒီည အိမ်ပြန်မှာ…”
ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောရင်း စားပွဲပေါ်က ကိုယ့်ပစ္စည်းတချို့ အိတ်ထဲ ကောက်ထည့်ပြီး လှည့်အထွက်…
ခေါ်သံနဲ့အတူ နီးကပ်လာတဲ့ မျက်နှာ.. ထို့နောက် ကျမ နှုတ်ခမ်းပေါ် နွေးထွေးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ကျရောက်လာတယ်… သူ့လက်တွေက ကျမ ခါးကို သိုင်းဖက်လာတဲ့အခါ…
ကျမ တင်ပါးလေး စားပွဲအစွန်းမှာ မှီမိသွားတဲ့အထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်း တွန်းဖက်ရင်း နေနေ ကျမနှုတ်ခမ်းကို မွတ်သိပ်စွာနမ်းတယ်..
သူ့လက်တွေ ကျမခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ရင်း အငမ်းမရထပ်နမ်းတယ်… နှုတ်ခမ်းခြင်း နမ်းနေရင်း သူ့လျှာနွေးနွေးက ကျမ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပွတ်သပ်ကျီစယ်ရင်း ကျမပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ်… ကျမ မျက်တောင်ဖျားတွေ စင်းကျသွားတယ်…
“ပြွတ် ပြက် ရှလွတ် ရှလပ် ”
အလိုလိုနေရင်း ကျမလက်တွေ သူ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ရင်း စိတ်ပါလက်ပါ ပြန်နမ်းမိတယ်…
“ရှေး… နင့်ကို… အဲ့.. ဆောရီး”
အလောတကြီးနဲ့ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ ညိုက ကျမတို့နှစ်ယောက် ဖြစ်အင်ကိုတွေ့ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ထွက်သွားတယ်… နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းရင်း အသက်ရှုမဝတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့… သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ကျမလည်ပင်းပေါ်ကို ဖြန့်ကျက်လာတယ်..
“ဟဟ… ယားတယ် ဟျောင့်”
ခပ်ဟဟရယ်ရင်း သူ့ခေါင်းကို ကျမ အတင်းတွန်းဖယ်ပစ်တယ်… သူကလဲ မရမက အတင်းအကျပ်လိုက်နမ်း…
ကျမ သူ့ရင်ဘတ်ကို အားနဲ့တွန်းဖယ်ပစ်မိတော့…ကျမခါးကို ခပ်ဖွဖွဖက်ရင်း… ကျမ မျက်လုံးကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ပြီး… သူက…
လို့ ကျမပြောမိတော့ သူက မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး…
“မူးစရာလား… ငါ ဘယ်တုန်းက အရက်သောက်လို့လဲ”
“အေ့လေ.. အရင်က မသောက်ပဲ အခုသောက်ချင်သောက်လာမှာပေါ့”
ခါးကိုဖက်ထားတဲ့ လက်တွေကို တွန်းဖယ်ချရင်း ကျမရုန်းတော့ သူကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လွှတ်ပေးတယ်…
“နင် ငါ့ကို ဘယ်တော့ လက်ထပ်မှာလဲ”
ကျမ အိတ်ကို လွယ်ရင်း သူလုပ်လို့ ပွသွားတဲ့ ဆံပင်တွေကို ပြန်ရှင်းဖို့ စိတ်မကူးတော့ပဲ သားရေကွင်းနဲ့ ခပ်မြင့်မြင့် စုချည်လိုက်တယ်…
“ရှေး.. ငါနင့်ကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းနေတာ ၃ နှစ် ၃ မိုး မကတော့ဘူးနော်…”
“နင် ၃ နှစ် ၃ မိုးမက တောင်းနေသလို… ငါလဲ နင့်ကို ၃ နှစ် ၃ မိုးမက ငြင်းနေတာပဲ.. ခုလဲထပ်ငြင်းမယ်… ငါနင့်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မထပ်ဘူး”
သူစိတ်မရှည်စွာ ကျမအိတ်ကို ဆွဲရင်း..
“အဲ့ဒါဆို ငါက နင့်အတွက် ဘာလဲ”
“သူငယ်ချင်းလေ… နင်ကငါ့ရဲ့ ထာဝရ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း”
“တော်ပြီ… နေနေ ငါတို့ အဲ့ကိစ္စ ဒီမှာတင်ရပ်ရအောင်”
“ဘာကို ရပ်စရာလိုသလဲ.. နင်နဲ့ငါက ဘာလဲ.. နင် စိတ်ဖြေဖို့အတွက် သုံးတဲ့ အရုပ်တရုပ်လား…”
“အရူးမထလို့ မရဘူး… နင် နင်အိမ့်က ထွက်လာပြီးတည်းက နင့်အနားကနေ တဖဝါးမှ ခွာခဲ့တဲ့ကောင် မဟုတ်ဘူး..”
“နင် ငါ့ဘေးနား တချိန်လုံးရှိနေရုံနဲ့… နင့်ကို ငါလက်ထပ်ရမယ်တဲ့လား”
“အာ့ဆို ငါကဘာလဲ.. နင့်ခန္ဒာကိုယ်ကို ငါ့ကို ပုံအပ်ခဲ့တာကရော”
“နင် ဘယ်ခေတ်မှာ နေနေတာလဲ.. ဒီခေတ်ထဲ အမှေးပါး တစ်ခုကို တစ်ဘဝစာ ထင်နေတဲ့ ယောကျာ်းမျိုးထဲ နင်ပါနေပြီလား”
“တော်စမ်းနေနေ… ငါက စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ မိန်းမ… အခြေအနေအရ ယောကျာ်းတွေနဲ့ တွဲရတယ်”
“ရှေး… နင်သီချင်းဆိုတာက အပျော်… နင်ဝါသနာပါလို့ဆိုတာ.. နင်ရော ငါရော ဒီတစ်ဆိုင်လုံးသိတယ်”
“ဒီက ပိုက်ဆံဆိုတာ နင့်အလုပ်ကရနေတဲ့ လစာရဲ့ အစွန်းထွက်တောင် မရှိပါဘူး နေနေ… နင် ဘာတွေရွဲ့ချင်နေရတာလဲ”
“တော်တော့… ငါဘာလုပ်လုပ်… ငါဘယ်လမ်းလျှောက်လျှောက်.. ငါ့ဘဝနဲ့ငါ… ငါ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ ငါပဲ.. နင်သိထားဖို့က ငါက နင့်သူငယ်ချင်း.. နင်နဲ့ တကြိမ်တခါ မှားခဲ့ဖူးတယ်… အဲ့အမှားကို နင်နင်းပြီး.. အထပ်အထပ်အခါခါ မှားဖို့နင်ကြိုးစားတယ်.. ငါလဲ အဲ့အမှားကို လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ငါတို့အတူတူ ဆက်မှားခဲ့ကြတယ်… ဒီလောက်ပဲ.. ငါနင့်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မထပ်ဘူး… နင်က ငါ့အတွက် ထာဝရ သူငယ်ချင်း… ဘာကြောင့်လဲ မမေးနဲ့.. အဲ့အတွက် ငါ့မှာ ပေးစရာ အဖြေမရှိဘူး.. နင်ငါ့ကို ဒီအခြေအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ရင် ကြိုက်တဲ့အချိန် ထွက်သွားလို့ရတယ်… အိုခေ..”
ကျမ စကားအရှည်ကြီးပြောပြီး အိတ်ကိုဆွဲ အပြင်ထွက်တော့ အနောက်ကနေ လိုက်လာ… သူ့ကားပေါ် ခေါ်တယ်… စိတ်ညစ်ညူးစွာပဲ… ကျမ သူ့ကားပေါ် တက်ထိုင်လိုက်တယ်.. လိုက်မပို့ပါနဲ့လို့ ဘယ်လိုပြောပြော ပြောမရတဲ့ နေနေက ကျမကို အတင်းအကျပ်ပဲ ညီမလေးဆီ လိုက်ပို့ခဲ့တယ်…
အင်းလေ ည ၁၂ နာရီဆိုတဲ့ အချိန်က နည်းမှမနည်းတော့ပဲ.. ဒါပေမယ့် သန်းခေါင်ထက် ညဉ့်မနက်တော့တဲ့ ကျမအတွက်ကတော့.. ကျမ ခပ်ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးမိတယ်… အိမ်ရှေ့ ကားရပ်သံကြားတာနဲ့… ညီမလေးက အိမ်ပေါ်ကနေ ပြေးဆင်းလာတယ်..
နှစ်လနီးပါး မတွေ့ရတာကြာတဲ့ ကျမကို အတင်းပြေးဖက်တယ်။
“နွယ်လေး… မအိပ်သေးဘူးလား.. ဘာလုပ်နေတာလဲ”
“တစ်ညလောက် ဒီမှာအိပ်ပါလား မမရယ်”
ကားပေါ်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ နေနေက
“ဟုတ်သားပဲ ရှေး… တစ်ည အိပ်လိုက်ပါလား…ကလေးလဲ နင့်ကို လွမ်းနေမှာပေါ့”
“ဟုတ်တယ် ကိုကို… မမကို ပြောပေးပါဦး”
ကျမ နေနေ့ကို တချက်ငဲ့ကြည့်လိုက်တော့… နေနေက ပုခုံးတွန့်ပြီး မဲ့ပြတယ်… ညီမလေးက မျက်နှာလေး ငယ်ပြီး ကျမကို မော့ကြည့်တယ်… ကျမ ညီမလေး ပုခုံးကို ဖက်ရင်း
“အိပ်နေကြပြီ.. နွယ်က စာကျက်နေတာ”
“အဲ့ဒါဆို ကားလာတာ ဘယ်လိုသိလဲ”
“နွယ်က ညတိုင်း ဒီကားသံပဲ မျှော်နေတာ”
ညီမလေးရဲ့ မဝံ့မရဲ အသံလေး နားထောင်ရင်း ရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ မကောင်းပေမဲ့လည်း..
“မမ အိမ်ထဲ မဝင်တော့ဘူး နွယ်… ညီမလေး အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ လာကြည့်တာ… ဟိုလူနဲ့ရော..”
“နွယ်… မမနဲ့ လိုက်နေလို့ မရဘူးလားဟင်.. အခုမဟုတ်တောင် နွယ် စာမေးပွဲ ဖြေပြီးတဲ့အခါကျရင်..”
“ကြည့်ရသေးတာပေါ့ နွယ်.. အခြေအနေ အရပေါ့…ညီမလေးအတွက် မုန့်ဖိုး”
ရှေး အိတ်ထဲကနေ ၁ ထောင်တန် ၃ အုပ် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်…
“စာမေးပွဲ အောင်အောင်ဖြေ… နှစ်ချင်းပေါက်အောင်ရင် လာခေါ်မယ်”
ပြုံးပျော်သွားတဲ့ ညီမလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ရတယ်… အဖေ နိုင်ငံခြား ထွက်ပြီး ၂ နှစ်လောက်ကြာတော့ အမေက ငယ်ချစ်ဦးဆိုတဲ့လူကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်တယ်… အဲ့သတင်းကိုကြားပြီး အဖေက အိမ်ပြန်မလာတော့တာ… ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီ…
အမေရဲ့ ငယ်ချစ်ဦးက အိမ်ပေါ်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး… ကျမကို ထိကပါး ရိကပါး လုပ်လာတယ်.. အမေကွယ်ရင် မျက်လုံးက ခေါတော တစ်ထောင်အားနဲ့ ကြည့်တယ်… အမေ့ကိုပြောတော့ သူ့ငယ်ချစ်ဦးက သူကလွဲပြီး တခြားစိတ်မဝင်စားလို့ ဒီအချိန်ထိ လူပျိုဘဝနဲ့ပဲ နေလာတာတဲ့… ညည်းတို့အပေါ် စိတ်နဲ့တောင် ပစ်မှားမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့…
စိတ်နဲ့တော့ မပြစ်မှားဘူး.. တစ်ရက် ကျမရေချိုးနေတုန်း… အရေးကြီး သွားစရာရှိလို့ဆိုပြီး.. သူပါ ရေလာဝင်ချိုးတယ်… စိတ်ထိန်းမရတာနဲ့… ရေခပ်တဲ့ ဒန်ခွက်နဲ့ မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်ခဲ့တယ်… ချောနေတဲ့ ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်မှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ အရှိန်နဲ့ သူ ချော်လဲပြီး ခေါင်းမှာ ၃ ချက် ချုပ်လိုက်ရတယ်…
အဲ့အချိန်က ကျမအသက် ၁၉နှစ်… နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူ… ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အထုပ်ဆွဲပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတယ်… မဆင်းခင် အဲ့လူကို မှာခဲ့တယ်… ကျမ ညီမလေးအပေါ်ကို ဒီအချိုးမျိုး ထပ်ချိုးကြည့်… အသက်နဲ့ကိုယ် အိုးစားကွဲပြီသာမှတ် လို့.. တကယ်တော့ သူလဲ ဘာမှမလုပ်ရသေးသလို.. ကိုယ်လဲ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး… အန္တရာယ်ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်ဘူးမလား…
ညီမလေး လက်ကိုဆွဲပြီး ထွက်လာချင်ပေမဲ့… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်… ဘယ်နားသွားခိုရမလဲ မသိနိုင်သေးတဲ့ဘဝ… အဖေ့ဆီကလဲ စာမလာ သတင်းမကြား…
ကားဘေးနား ရပ်စောင့်နေတဲ့ နေနေက လှမ်းခေါ်တယ်… ဘေးနားမှာ တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောနေတဲ့ ညီမလေး ပြောနေတဲ့ စကားတွေလဲ မကြား…
“နွယ်… မမ ပြန်တော့မယ်… စာကိုကြိုးစား.. ဆယ်တန်းလေးတော့ အောင်မှဖြစ်မယ်… နော် ညီမလေး”
“ဟုတ်.. စာမေးပွဲပြီးရင် လာခေါ်နော်”
“စိတ်ချ… အစစ အရာရာ သတိထားနော်… အခန်းတံခါးပိတ်ဖို့ မမေ့နဲ့.. အမေ မရှိရင် အိမ်ထဲမှာ မနေနဲ့… ခြံထဲမှာပဲနေ.. ကြားလား”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ… နွယ် သတိထားပါ့မယ်”
“လိမ္မာတယ်… အာ့ဆို မမပြန်တော့မယ်”
“မမလဲ ညီမလေးကို ချစ်တယ်”
ညီမလေး နှဖူးကို ဖွဖွနမ်းရင်း ခုံပေါ်က ထတယ်… ညီမလေးက ကားနားထိ လိုက်ပို့ရင်း…
“ကိုကို… ကိုကိုတို့ ဘယ်တော့ လက်ထပ်ကြမှာလဲ”
“ကိုကိုလဲ ပြောနေတာပဲ နွယ်ရဲ့… နွယ့်မမက…”
“နွယ်… အထဲဝင်တော့ ညဉ့်နက်နေပြီ”
“အာ့ဆို နွယ်ဝင်တော့မယ်… တာ့တာ.. တာ့တာ ကိုကို”
နေနေ့ကို လှည့်ကြည့်တော့ နွယ့်ကို မချိပြုံးနဲ့ လက်ပြရင်း… ကျမ ကြည့်နေတာ မြင်တော့ မျက်စောင်းထိုးတယ်.. ကျမစိတ်ထဲ ရယ်ချင်တာကို မြိုသိပ်ပြီး
“အခြောက်မကြီး ကျနေတာပဲ.. မျက်စောင်းက ထိုးနေသေးတယ်”
နေနေက ကျမအတွက် ကားတံခါးဖွင့်ပေးရင်း…
“ကားပေါ်တက် အိမ်ရောက်မှ ခြောက်မခြောက် လက်တွေ့လဲပြမယ်… ပါးလဲ အကျိူးခံမယ်”
ကျမ စိတ်ဆိုးချင် ယောင်ဆောင်ရင်း… ကားပေါ် ဝင်ထိုင်တယ်.. နေနေက နေနှင့်ဦးပေါ့ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကားလေးကို ကျမ တိုက်ခန်းလေးဆီ ဦးတည်တယ်.. ကျမ တိုက်ခန်းကို ရောက်တဲ့အခါ..
“နေနေ… နင် အိမ်တန်းပြန်နော်… ဟိုဝင်ဒီဝင် ဝင်မနေနဲ့… ဟဲ့ ဘယ်ကို”
ကျမ စကားကိုဆုံးအောင် နားမထောင်ပဲ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ကျမဘက်ခြမ်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်တယ်…
“တံခါးဖွင့်ပေးမှာများ… ငါပြောတဲ့ စကားလေးဆုံးအောင် နားထောင်… အမေ့ နေနေ!!”
ဘာမပြောညာမပြော ကျမ ကိုယ်လေးကို ဆွဲပွေ့ချီပြီး တံခါးကိုကိုယ်နဲ့ တွန်းပိတ်တယ်…
“ဟဲ့..အရူး… တစ်ယောက်ယောက် မြင်သွားရင် မကောင်းဘူး… ငါ့ အိတ် ငါ့အိတ်..”
ကျမ ဘယ်လိုပြောပြော သူဦးတည်နေတာ ကျမအခန်းဆီကို… ကျမ သူ့ရင်ဘတ်ကို တဘုန်းဘုန်း ထုရင်း…
“ငါ့ကို အောက်ချပေး… ငါအော်မှာနော်”
ဒုတိယအထပ်မှာရှိတဲ့ ကျမ အခန်းဆီကို သူဟာ ဘယ်ကရတဲ့ အားတွေနဲ့မှန်းမသိ ကျမကို ပွေ့ပြီး တက်လာတယ်… အခန်းရှေ့ရောက်တော့မှ ကျမကို အောက်ချပေးတယ်… ကျမ သူ့လက်မောင်းကို အားနဲ့ တစ်ချက်ထုရင်း
“သော့က ငါ့အိတ်ထဲမှာလေ.. လဒရဲ့… တော်ပြီ ဒီည အိမ်မှာ မအိပ်ဘူး”
ကျမ သူ့ကိုစရင်း လှေကားက ပြန်ဆင်းဖို့ကြံတော့… ကျမလက်မောင်းကို ဆွဲထားရင်း သူ့အိတ်ထဲက သော့ကိုထုတ်တယ်…
“ဟယ်..ကြည့်စမ်း.. နင် ငါ့အိမ်သော့ကို ဘယ်တုန်းက ပွားထားတာလဲ”
လို့ကျမ အံ့သြတကြီးဆိုတော့… ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ ပြုံးပြပြီး
“နင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ငါနဲ့ဆိုင်တယ်”
သော့ကို ခပ်မြန်မြန်ဖွင့်ပြီး ကျမ ကို အခန်းထဲ ဆွဲသွင်းတယ်…
အခန်းတံခါးကို ဆွဲပိတ်… ကျမကို နံရံမှာမှီပြီး…အငမ်းမရ သူနမ်းတယ်.. မျက်နှာအနှံ့ တရှုံ့ရှုံ့ နဲ့ နမ်းလို့မဝနိုင်တော့… နားရွက် လည်ပင်း… အကုန်လုံးဟာ… သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ အလိုကျ.. နောက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျမပေါင်ကို ဆွဲမြှောက်ရင်း သူ့ကို ခွထားစေတယ်… ကျမ အင်္ကျီအောက်ကနေ နွေးထွေးတဲ့လက်တွေ ဝင်လာတယ်…
လက်တွေသာ နေရာအနှံ့ လှုပ်ရှားနေတာ… သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက ကျမ နှုတ်ခမ်းကနေ ခွာမသွားဘူး.. ကျမ စိတ်တွေ ဘယ်ထိန်းရပါ့မလဲ.. သူ့လည်ပင်းသိုင်းဖက်ရင်း သူ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ခွတက်လိုက်တယ်… နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်နေတာကို မကွာစေပဲ သူက ကျမတင်ပါးတွေကနေ ချီမပြီး…ဆိုဖာပေါ် အသာအယာချတယ်…
“ပြွတ်.. အဟာ့.. နေနေ”
ကျမတို့ နှုတ်ခမ်းတွေ ခဏကွာသွားတယ်… ကျမနှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ရင်း သူ့ကို ကြည့်မိတော့ သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ ရမ္မက်အငွေ့အသက်တွေ မြင်ရတယ်… ကျမဝတ်ထားတဲ့ စကဒ်ကို အသာအယာဆွဲချွတ်ပြီးတဲ့အခါ… အလိုက်တသိ ကျမ ပေါင်ကို ကားလိုက်မိတယ်… ကျမကိုယ်တိုင်ပဲ ကျမရဲ့ စပို့ရှပ်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်.. ကိုယ်အထက်ပိုင်းမှာ ကျမရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားတွေကို မလုံ့တလုံ ဖုံးထားတဲ့ ဘရာလေးတထည်ပဲ ကျန်တော့တယ်။
သူကတော့ ကျမပေါင်တံတွေကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီးပင်တီတစ်ခုတည်းသာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ကျမရဲ့ ပိပိလေးဆီ သူ့ခေါင်းတွေ ငုံ့ကျသွားတယ်…
“အား… နေနေ နင်…”
သူ ကျမရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းတယ်.. ထို့နောက် ပေါင်တံတွေဆီ သူ့နုတ်ခမ်းတွေ တရွေ့ရွေ့ ဆက်သွားတယ်… ကျမ အသည်း တယားယားပါပဲ..
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ အလုပ်များနေချိန်မှာ… သူ့လက်တွေလဲ မနားရပါဘူး… ကျမ တကိုယ်လုံးကို သူ့လက်ဖဝါးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ကျီစယ်ပြီး နောက်ဆုံး တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ပင့်မတယ်…
ကျမ ဘယ်လိုပဲဟန်ဆောင် ငြင်းနေပေမဲ့ ကျမပိပိလေးဆီက တစိမ့်စိမ့်ကျနေတဲ့ ဝတ်ရည်လေးတွေက သက်သေပဲ ထင်ပါတယ်… အနမ်းတွေနဲ့ ကျမကိုနှိပ်စက်နေရင်းက…
ပင်တီပေါ်က စိုကွက်နေတဲ့ နေရာကို မျက်စပစ်ပြရင်း ရိတဲ့တဲ့ မေးတယ်…
“နင်က တကယ် အရည်ရွှမ်းတာဟ… ခုကြည့်… ဘာမှတောင် မလုပ်ရသေးဘူး… ဟားဟား”
ကျမ ပေါင်ကို အတင်းပြန်စိတော့… တင်ပါးပေါ်ရောက်နေတဲ့ သူ့လက်တွေက ပင်တီကို ဆွဲချွတ်ပြီး.. ကျမပိပိလေးကို မက်မက်စက်စက်ကြည့်တယ်… ငါ့တကိုယ်လုံး နင့်ကို ပုံအပ်ခဲ့တာပါ… နေနေ အရာရာ နင့်သဘောပါ… ကျမ သူ့ကို ရီဝေဝေကျိရင်း…နှုတ်ခမ်းကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ကိုက်မိတယ်..
“နင်.. အရမ်းဆက်စီကျတယ်… ရှေး… နင့်လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းမ ငါဘယ်တုန်းကမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး”
သူ့လက်တွေက ကျမပေါင်တံတွေကို ကားရင်း…ခြေထောက်တွေကို ဆိုဖာပေါ် တင်လိုက်တယ်.. သူ့လက်ဖဝါးတွေနဲ့ ကျမ ပိပိကိုဖုံးကွယ် ပွတ်သပ်ရင်းနဲ့.. သူဆက်ပြောတယ်…
“နင်သိလား… ဒီနေရာလေးလေ.. နင့်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ရင်သားတွေပြီးရင် ငါအကြိုက်ဆုံး နေရာလေး… ဒီလိုလေး ဖောင်းတင်းနေတာကို ကြိုက်တယ်…”
ပိပိလေးကို အားနဲ့ တချက်ဖိညှစ်ရင်း… ပေါင်ခြံလေးတွေကို ဆက်ပွတ်သပ်တယ်..
ကျမရဲ့ ရသာဖူး အစိလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ တို့ရင်း…
“ချစ်စရာလေးသိလား… ရဲရဲလေး.. ငါချစ်တယ်.. နောက်ပြီး….”
အစိလေးကို လက်မနဲ့ တချက်နှစ်ချက်ပွတ်ပြီး…နှုတ်ခမ်းဖတ် သေးသေးလေးတွေကို ဖွဖွလေး ဖြဲတဲ့အခါ.. ပိပိထဲက အရည်လေး စိမ့်ခနဲ ထွက်ကျတယ်…
“ဒီမှာလေး… ဒီတွင်းဝလေး… ငါ့ကိုကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး အရသာ ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ တွင်းလေး…”
သူက ကျမတင်ပါးတွေကို သိုင်းဖက်ရင်း.. ပိပိလေးပေါ်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတင်တယ်…
ကျမ သူ့ဆံပင်တွေကို ဆွဲကိုင်ဖွရင်း… ဖီးလ်တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ပေါ့.. သူ့လျှာဖျာလေးနဲ့ တွင်းဝလေးကို တပြက်ပြက်ယက်လိုက်… အစိလေးကို လှမ်းစုတ်လိုက်… ပွင့်ဖတ်လေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိဆွဲလိုက်… ကျမမယ်… ကော့ပျံနေတော့.. သူ့လက်တွေက ကျမ နို့တွေပေါ်ရောက်လာတယ်… ကျမ အလိုက်တသိနဲ့ ဘရာချိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်.. သူ့မျက်လုံးတွေက ရမ္မက်အရမ်းဆန်လာတယ်..
ပိပိလေးနဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ တဖြည်းဖြည်း အပေါ်ကို ဆန်တက်လာတယ်… လျှာဖျားလေးနဲ့ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးကို ပွတ်ဆွဲရင်း နှုတ်ခမ်းလွှာနှစ်ခုဟာ နို့သီးခေါင်းလေးပေါ်မှာ လမ်းဆုံးတယ်…
ကျမ ခေါင်းလေးမော့သွားတယ်.. သူ့တကိုယ်လုံးဝတ်စုံပြည့်နဲ့ ကျမ ပေါင်ကြားထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါ…ကျမ ပေါင်တံတွေနဲ့ သူ့ကို ခွလိုက်တယ်… သူ့လက်တွေက ကျမကို သိုင်းဖက်ရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကတော့ ကလေးတယောက်လို ကျမ နို့တွေကို စို့နေတယ်… ကလေးတွေထက် သာတာကတော့ သူက လျှာဖျားနဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ဝိုက်ဝိုက်ပြီး လျက်လိုက်… တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်လိုက်… ကျမရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တွေ လေပေါ်မှာ ဝဲလို့… ကျမစိတ်တွေကို လွှတ်လိုက်တယ်…
သူ့လည်ပင်းကို ယီးလေးခို သိုင်းဖက်ရင်း… သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်စွဲယူတယ်… သူ့ရှပ်အကျီကြယ်သီးတွေကို ခပ်မြန်မြန် ဆွဲဖြုတ်ရင်း… ကြွက်သားတွေနဲ့ သန်မာတောင့်တင်းတဲ့ ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ်ကို ပွတ်သပ်မိတယ်…
“ခုချိန်မှတော့ နင်ဖြေးခိုင်းလဲ ဖြေးလို့မရတော့ဘူး နေနေ နင်စတဲ့ ဇာတ်လမ်း နင်ပဲအဆုံးသတ်ရမှာ…”
သူ့ဘောင်းဘီက ခါးပတ်ကို ဆွဲဖြုတ်… ဇစ်ကို ဖွင့်ချရင်း.. ကျမခေါင်းကို တွန်းဖယ်ရင်း သူမျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး လှမ်းမေးတယ်…
သူ့လီးက သိပ်မတောင်သေးတာတောင် ၅ လက်မကျော်ကျော် ရှိတယ်… လီးထိပ်က အရေပြားကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲချရင်း… ပေါ်လာတဲ့ ခေါင်းလေးကို လက်မနဲ့ တစ်ချက် နှစ်ချက် ပွတ်တဲ့အခါ… သူခပ်တွန့်တွန့် ဖြစ်သွားတယ်… သူ့မျက်နှာကို မျက်လုံးလှန်ကြည့်ရင်း… ဒစ်ခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ လျက်လိုက်တယ်…
ပြီးတော့… ကျမပါးစပ်ထဲ ခေါင်းတစ်ခုလုံးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်… ကျမလျှာတွေကို ကစားပြီလေ.. ဒစ်ကြားထဲကို လျှာနဲ့လျက်လိုက်… ပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်… ပြန်ငုံလိုက်.. ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိုင်သလောက်ထိ ငုံစုပ်လိုက်နဲ့… ခပ်ပြင်းပြင်း အချိန်ကြာကြာ ငုံစုပ်တဲ့အခါ…
“ရှီး… အ့… ကောင်းတယ်ကွာ”
သူ့ပါးစပ်က တရှီးရှီးနဲ့ ဖြစ်လာသလို… ကျမလဲ စိတ်တွေ တအားပါလာတယ်…
သူအားမရတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့… ကျမဆံပင်ရှည်တွေကို စုကိုင်ပြီး… ကျမ ပါးစပ်ထဲက ဇွတ်အတင်း ညှောင့်ပါတော့တယ်…
ကျမ သူ့ပေါင်တွေကို ထိန်းကိုင်ရင်း… သူ့စိတ်တိုင်းကျ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်.. သူ့လီးချောင်းဟာ… ကျမ ပါးစပ်ထဲ စိတ်ရှိသလို ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်… တချက်တချက် အာခေါင်ထဲထိ ရောက်လာတယ်… နောက်ဆုံး အသက်ရှုမဝတော့မှ သူ့ပေါင်ကို လက်နဲ့ရိုက်ပြီး သတိပေးရတယ်.. ဒါတောင် တစ်ချက် နှစ်ချက် ဆက်ဆောင့်လိုက်သေးတယ်..
“ဆောရီး… ရှေး.. ငါ အရမ်းကောင်းနေလို့”
မျက်စောင်း တချက်ထိုးရင်း… သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းတယ်… သူ့ကိုယ်ပေါ် ခွတက်တဲ့ အခါ… သူက ကျမတင်ပါးတွေကနေ ချီမတယ်… နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်စေပဲနဲ့ပေါ့.. အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါ… ကျမကို ခုတင်ပေါ်ပစ်ချရင်း… သူကကျမအပေါ်မှာ စီးမိုးတယ်… ကျမ ပေါင်တံတွေကို ကားပေးတော့… သူ့လီးကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အရည်နည်းနည်းစို့နေတဲ့ ကျမပိပိအဝမှာ တချက်နှစ်ချက် ပွတ်ဆွဲတယ်… ကျမ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပစ်လိုက်တော့…
“ရှေး… မျက်လုံးတွေ မပိတ်ပစ်လိုက်နဲ့ ငါ့ကို ကြည့်… ငါနင့်ကို လုပ်တော့မှာ…ခငါ့လီးနဲ့ နင့်ကို လိုးတော့မှာ… နင်ငါ့မျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်”
ကျမ မျက်နှာကို တဖက်စောင်းလိုက်တော့… သူကမေးဖျားကနေ ကိုင်ရင်း မျက်လုံးတွေ ထပ်ဖွင့်ဖို့ ပြောတယ်.. ကျမ သူ့ကို မကြည့်ချင် ကြည့်ချင် မျက်လုံးတွေ ဖွင့်ကြည့်ရတဲ့အခါ… သူက ပြုံးဖြီးဖြီး လုပ်ရင်း… သူ့လီးကို ကျမပိပိထဲကို ထိုးသွင်းလာတယ်…
ဒစ်ခေါင်းလေး ဝင်ရုံနဲ့တင် တင်းကျပ်သလို ခံစားရတယ်… သူက ဝင်သလောက်ပဲ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း… တဖြည်းဖြည်း ရှေ့တိုးလာလိုက်တာ…နောက်ဆုံး သူ့ ၆ လက်မကျော်တဲ့ လီးတချောင်းလုံး အကုန်အစင် ဝင်လာတယ်… ရှောရှောရှုရှု ပါပဲ..
ကျမတို့ နှစ်ယောက်အတွက် အခုက အစမှ မဟုတ်တာ… အဲ့ဒီနောက်တော့ သူက လိုးတဲ့အရှိန်ကို မြှင့်တင်လိုက်တယ်… ကျမကို အပေါ်စီးကနမ်းရင်း…သူ့လီးကို ကျမပိပိထဲ အရှိန်နဲ့ ဝင်ထွက်စေတယ်..
“အင့်… နေနေ အရမ်းမကြမ်းနဲ့ဦးဟာ… အ.. အဟာ”
“ငါလဲ… နင့်အဖုတ်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်… အရမ်းကောင်းတယ်… အား… အရမ်းမညှစ်နဲ့လေ”
ကျမ သူ့ရင်ဘတ်ကြီးကို ထုတော့… သူက ရယ်ရင်း အိပ်ရာပေါ် လှဲချပြီး… ကျမကို အပေါ်ဆွဲတင်တယ်.. ကျမအပေါ်ရောက်တော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ် လက်ထောက်ရင်း… ကျမ တင်ပါးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တော့တယ်… ကျမ ပိပိနဲ့ သူ့လီးကိုညှစ်ထားရင်း တင်ပါးတွေကို စကောဝိုင်းဝိုင်းတယ်… နောက်တော့ ကျမ မြင်းစီးသလို ဒုံးစိုင်းတော့တာပါပဲ…
ကျမ ပေါင်ခြံက အရည်တွေ တအားရွှဲနေတယ်.. သူ့လက်တွေက ကျမ နိူ့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲရင်း…အောက်ကနေ ပင့်ပင့်လိုးတယ်.. ကျမတို့နှစ်ယောက် တက်ညီလက်ညီနဲ့ ပန်းတိုင်ဆီ အရောက်လှမ်းတယ်… ကျမ မြင်းစီးတာ နည်းနည်းကြာတော့ သူက ကုန်းထရင်း ကျမ နိူ့နှစ်လုံးကို စို့တယ်.. ကျမ သူ့ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ပြီး… ရင်ဘတ်တွေကို ပိုကော့ပေးတယ်.. ကျမ အရှိန်နည်းနည်းလျော့လာတဲ့အခါ… သူက တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ပင့်ကိုင်ရင်း ဆောင့်လိုးချစေတယ်..
“အင်း… ပုံစံပြောင်းရအောင်… နင်ကုန်းပေး..”
ကျမ သူ့ကိုယ်ပေါ်က ထလိုက်တဲ့အခါ… သူ့လီးက ပြွတ်ကနဲ ကျွတ်ထွက်သွားတယ်…
“ဟာ… ဘာလို့ ချွတ်လိုက်တာလဲ”
“ဒီတိုင်းလေး လှည့်ပြီး ကုန်းလိုက်လို့ ရနေတဲ့ဟာကို”
“နင်တော့ သေတော့မှာပဲ.. ဖြန်း”
ကျမတင်ပါးကို လက်ဝါးနဲ့ ဖြန်းကနဲနေအောင် ချလိုက်တယ်… ကျမ စပ်ဖြင်းဖြင်း ဖြစ်သွားပြီး ဖီးလ်နည်းနည်း ပိုတက်သွားတယ်…
ကျမ ထိုင်ဖို့ ကြိုးစားတော့…
ကျမ ခါးကိုဆွဲယူရင်း ကျမ ကို ပုံစံနေရာချတယ်..
“ရှေး… နင်သိလား… နင့်တင်ပါးတွေက အရမ်းကြီး မကားပေမဲ့.. အနေတော်လေး… ပြီးတော့ ကျစ်နေတာပဲ..”
သူ့လီးကို ပိပိအဝမှာ ပြူတစ်ပြူတစ်လုပ်ရင်း… ပြန်မေးတယ်… ကျမ သိတယ်… သူ ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ပြောချင်နေပြီ…
“နင့်လီးနဲ့ ငါ့ကို လုပ်ပေးဖို့ပြောတာ”
“နင့်လီးနဲ့ ငါ့အဖုတ်ကို လိုးပေးဖို့ ပြောနေတာ…သေနာကောင်”
ကျမ စိတ်မရှည်စွာ ဆဲတော့… သူက…
ကျမ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း… သူ့လီးကို ပိပိထဲထည့်တယ်… သူ့လီးက စေးကပ်စွာနဲ့ ဝင်လာတယ်…
“အား… ဖြည်းဖြည်း ကျပ်နေတုန်းပဲ”
“အင်း… နင့်ပိပိက ကျဉ်းနေတုန်းပဲ… ငါဒီလောက် လုပ်နေတာတောင်… အင့်ကွာ..”
သူက ကျမအဖုတ်ထဲ တရှိန်ထိုး ဆောင့်လိုးချရင်း…ဆက်တိုက်ဆိုသလို… တစွပ်စွပ်နဲ့ လိုးပါတော့တယ်… ကျမ တင်ပါးတွေကို ရိုက်လိုက်… ကျမ ဆံပင်တွေကို ဆွဲလိုက်နဲ့ သူစိတ်ရှိသလို လိုးတော့တယ်… တချက်တချက် သူအားထည့်တဲ့အခါ… သားအိမ်ကို သွားထိသလို အောင့်ပေမဲ့လဲ နာကောင်းလေးပေါ့…
ကျမ စိတ်တွေ တအားဖြစ်လာပြီး… သူ့တင်ပါးတွေကို လက်နဲ့ နောက်ပြန်လှမ်းဆွဲတယ်… ဒါပေမဲ့ မမိပါဘူး… ကျမ မျက်နှာ မွေ့ယာပေါ် ပစ်ကျသွားတယ်… ကျမပြီးတော့မယ်.. သူ့လီးဝင်ထွက်နေတဲ့ အရှိန်ကို ထပ်တင်တယ်.. ကျမခါးကို ဆွဲကိုင်ရင်း အားရပါးရလိုးတဲ့အခါ…
“အား… နေနေ… အင့်အင့်”
“ကောင်းလား… ငါလိုးပေးတာ ကောင်းလား”
“အင့်… အီး… အဟင့်…”
ကျမ အသံတောင် မထွက်နိုင်တော့ဘူး… အရမ်းကောင်းနေပြီ… ကျမပြီးတော့မယ်… သူ့လီးကို ကျမ ပိပိထဲ ဝိုက်ဝိုက်လိုးရင်း… တချက်ဆောင့်တယ်… နောက်တခါ ပြန်ဝိုက်လိုးတယ်… တချက်ဆောင့်တယ်… နောက်ဆုံး အကြိမ် ဆောင့်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမ ပစ်ကျသွားတယ်…
“အား… အဟင့်… အင့်… အင့်”
ကျမ တကိုယ်လုံး တုန်ရီနေတဲ့အခါ… သူခဏဖက်ထားရင်း…
“ငါ အပြီး လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်”
ကျမ ခေါင်းအသာငြှိမ့်တဲ့အခါ.. သူအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကျမကို မရပ်မနား လိုးတော့တယ်… ပြီးလက်စ ကျမလဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လိုးခံရတဲ့အတွက် အရှိန်ပြန်တက်လာတယ်…
“အား… ရှေး… ငါနင့်ကို လိုးနေပြီ”
“အား… အင့်… ရော့ကွာ… ရော့ကွာ”
သူတအားဆောင့်လိုးရင်း… နောက်ဆုံး… ကျမ နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီးပြီး သူ့လီးကို ပိပိထဲက စုပ်ဆွဲတဲ့အခါ..
သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်ရင်း ကျမတင်ပါးပေါ် အရည်တွေ ဖြန်းတယ်.. ပူနွေးနွေး အရည်တွေ တင်ပါးပေါ်ကျလာတဲ့အခါ… ကျမ အိပ်ရာပေါ် ဝမ်းလျားမှောက်ကျသွားတယ်… သူကတော့ ကျမ ကိုယ်ပေါ်ထပ်လျက်ပေါ့.. တော်တော်လေးကြာတော့… သူ ကျမကိုယ်ပေါ်က ဆင်းပြီး… ဘေးနားက ရေစိုတစ်ရှုးဘူးကို ဆွဲယူ… တင်ပါးပေါ်တင်နေတဲ့ သူလီးရည်တွေကိုလဲ သန့်ရှင်းပေးသလို… ကျမ အဖုတ်လေးမှာ ကပ်စီးနေတဲ့ ကျမအရည်တွေကိုလဲ သန့်ရှင်းပေးတယ်…
ပြီးတော့ အိပ်ရာပေါ်လှဲ.. ကျမကို သူ့လက်မောင်းပေါ်ဆွဲယူရင်း… တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်အိပ်တယ်… ကျမ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတယ်…
ခေါင်းရင်း ပြတင်းပေါက်က နေခြည်နွေးနွေး မျက်နှာပေါ် ဖြာကျလာခြင်းနဲ့အတူ… နားထဲ စကားပြောသံတချို့ ကြားမိတယ်…။ အိပ်ရာက ငုတ်တုတ် ထထိုင်မိတော့… ကျမ ကိုယ်ပေါ် ဘာအဝတ်အစားမှမရှိ… အင်္ကျီကောက်စွပ်ရမှာ ပျင်းမိသည်နှင့် စောင်ကို ပတ်ပြီး…အခန်းအပြင်ထွက်မိသည်။
“ကျွန်တော်က ဘာကိစ္စ သူတို့ကို ကြိုဆိုရမှာလဲ အဖေ… အမေဆုံးတည်းက အဖေ့နောက်မိန်းမကို အိမ်ပေါ် ခေါ်တင်တယ်… ကျွန်တော် ဘာပြောခဲ့သလဲ.. ခု သူ့သားရောက်လာတာကို… ကျွန်တော်က ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုရမယ်ပေါ့… ဆောရီးပဲ အဖေ… ကျွန်တော် စိတ်ထဲမပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး”
ကျမ မီးဖိုခန်းအဝကို ရပ်မိသည်။ နေနေက မနက်စာပြင်ရင်း ဖုန်းပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျမကို လှမ်းမြင်တော့ နေနေက ပြုံးပြသည်။
“အာ့ဆို ဒါပဲ အဖေ… မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့မှ တွေ့တယ်သာ မှတ်လိုက်တော့.. သူတို့စိတ်နဲ့ အမေ သေသွားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်… ကျွန်တော် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာတော့ မကြိုဆိုနိုင်ဘူး… ကျန်တာ အဖေ့သဘောပဲ.. ကျွန်တော် ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်.. ”
ကျမ ဘာလဲဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပြတဲ့အခါ.. သူက ပေါင်မုန့် ကြက်ဥကြော်ကို ပန်းကန်ပြားထဲ လှယ်ထည့်ရင်း…
“အိပ်ပုတ်ကြီးမ… မျက်နှာမသစ် ဘာမသစ်နဲ့ ထမင်းစားခန်းထဲ ဝင်လာတယ်.. ရေအရင် သွားချိုး… ငါ ကော်ဖီနှပ်ထားမယ်… မနက်စာ လက်ဆုံမစားရတာကြာပြီ”
ကျမ သူပြောနေတာကို ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံနဲ့…ကုလားထိုင်ပေါ် ဝင်ထိုင်ပြီး…
“နေနေ… နင်စင်္ကာပူက ပြန်လာပြီးတည်းက အိမ်မပြန်သေးဘူးမလား”
“အခု ဘယ်မှာနေလဲ.. ဟိုတယ်မှာပဲလား”
“ငါ့အတွက် ပူမနေစမ်းပါနဲ့ဟာ… နင်နဲ့ လာနေမယ်ပြောတော့ နင်လက်ခံလို့လား”
“နင် ဟိုတယ်မှာ နေမယ့်အစား… ဟိုတိုက်ခန်းမှာ ပြောင်းနေရင် ရရဲ့သားနဲ့”
“ငါ့မှာ နေစရာရှိပါတယ်… အခန်းပြင်နေတုန်းမို့”
“ဘယ်မှာလဲ.. ငါတောင် မသိရပါလား”
“ပြောစရာလား… နောက်တော့ နင်သိရမှာပဲ..”
ကျမ သူ့ကို မျက်စောင်းထိုးရင်း… ပန်းကန်ထဲက ပေါင်မုန့်ကြော်ကို နှိုက်ဖို့ လက်လှမ်းတော့…
“အမယ်… သူများ အိမ်က သူများပစ္စည်းတွေနဲ့… သူကပဲ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း..”
“ဈေးထပ်တင်မယ်လေ… နင် မုန့်တစ်ခု ယူစားရင်… ငါနင့်ကို တကြိမ်စားမယ်”
“လူယုတ်မာကြီး… မနက်စောစော ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ”
သူလှမ်းလာပြီး… ကျမကို ဇွတ်အတင်း ပွေ့ချီဖို့ ပြင်တဲ့အခါ… ကျမ စောင်ကို ပိုက်ပြီး… သူ့ရှေ့က အမြန်ခွာရတယ်… လက်သွက်တဲ့ သူက နောက်ကနေ စောင်ကို လှမ်းဆွဲတော့… စောင်က ကျမကိုယ်ပေါ်ကနေ သူ့လက်ထဲ ရောက်သွားတယ်… ကျွန်မ လှစ်ခနဲ အေးသွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ.. သူက ကျမကို ဆွဲပွေ့ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ်…
“အမ်း… လူယုတ်မာကြီးနော်… နင်နော်… ခုချပေး… နေနေ… အစုတ်ပလုတ်ကောင်..”
သူ့ရင်ဘတ်ကို တဘုန်းဘုန်း ထုရုံအားမရပဲ သူ့လက်မောင်းကို လှမ်းကိုက်တဲ့အခါ… သူက ငုံ့ပြီး ကျမပါးကို ဖိနမ်းတယ်… ကျမ ကိုက်နေရာက အလန့်တကြား မော့ကြည့်တော့… သူက ထပ်ကိုက်လေ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မျက်စပစ်ပြတယ်… ကျမ နောက်ထပ် မကိုက်ရဲ.. ဒီလူဟာ ချစ်ပြီဆို မလွယ်တဲ့လူမို့လား… ကျမကို ရေချိုးခန်းထဲချပြီး…
“ငါ… ရေနွေးစပ်ပေးပြီးသား… မြန်မြန်ချိုး… နင်က ရုံးပိတ်ရက်မို့ အေးဆေးနေနိုင်ပေမဲ့… ငါက သွားစရာရှိသေးတယ်… တခါတလေလေး မနက်စာ အတူစားရတာကို.. လိမ္မာတယ်… နော်”
ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွ ပုတ်ရင်း… ကလေးလို ချော့ပြီး သူပြောတော့… ကျမ မျက်စောင်းထိုးရင်း… ရေချိူးကန်ထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်… သူကတော့ ပြန်ထွက်သွားတယ်… တကယ်ကိုပဲ ရေကနွေးနွေးလေးပါ… ဒီလူကို ကျမ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် လက်ထပ်သင့်သလား… ကျမ သူနဲ့ ကိုယ်ချင်းရင်းနှီးတယ်… စိတ်ချင်းရင်းနှီးတယ်… ဒါပေမဲ့ လင်ယောကျာ်း တစ်ယောက်လို တစ်သက်တာ လက်တွဲသွားနိုင်မလား… တခါတလေ အင်မတန် သဝန်တိုတတ်တဲ့သူဟာ… အခုလိုမျိုး… ကျမဆန္ဒ ကျမ သဘောအတိုင်း ထာဝရ လိုက်လျောနိုင်ပါ့မလား..
အားးး စိတ်ရှုပ်လိုက်တာ… မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ကျမအား အခွင့်သာတိုင်း လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတတ်သော… ကျမ အနွံတာခံသော… ကျမအားအပြည့်အဝ နားလည်ပေးနိုင်သော … တခါတရံ အချစ်စိတ်တွေ ထိန်းမရတိုင်း သောင်းကျန်းတတ်သော… နေမင်းခ ဆိုသည့် လူတစ်ယောက်သည်…. ကျမသူငယ်ချင်း အဖြစ် ရှိနေတုန်းပင် ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 10,734
← နှစ်ယောက်ထဲ လုပ်ချင်တာ
B-side (ဘီဆိုက်ဒ်) →